रूसको आकाशमा देखियो महाविनाशकारी विमान, पुटिन के गर्न चाहन्छन् ? — Imandarmedia.com
रूसको आकाशमा देखियो महाविनाशकारी विमान, पुटिन के गर्न चाहन्छन् ?
काठमाडौं। युक्रेन युद्धको बीचमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको महाविनाशकारी विमान पछिल्ला दिनमा मस्कोको आकाशमा उडिरहेको देखिएको छ। यो विशेष विमानले आणविक युद्धको अवस्थामा पुटिनलाई हावामा उडाउन सक्छ।
इल्‍यूशिन आईएल-८० मस्को शहर बाहिर धेरै तलबाट उडेको देखिएको छ। युक्रेन युद्धको बीचमा रुसले पनि आणविक हमलाको धम्की दिएको बेला यो विमान देखिएको हो।
यसैबीच, रुसी अधिकारीहरूले उक्त विमान आउँदो सोमबार हुने वार्षिक विजय दिवस परेडमा रेड स्क्वायरमा देखिने दाबी गरेका छन्। यो विमान यस कार्यक्रमको लागि पूर्वाभ्यास गर्दैछ। सोभियत युगको यो विमान कुनै झ्यालविनाको छ।
यसलाई फ्लाइङ क्रेमलिन उडिरहेको रूसी राष्ट्रपति कार्यालय भनिन्छ। सन् २०१० यता रुसको विजय दिवस परेडमा उक्त विमान देखिएको थिएन। यो परेड दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरको सेना विरुद्ध सोभियत संघको विजयको सम्झनामा मनाइन्छ।
युक्रेन युद्धको बीचमा पुटिन पश्चिमी देशहरूलाई सन्देश दिन चाहन्छन्। आइएल-८० म्याक्सडोम विमानसँगै दुई मिग-२९ लडाकु विमानहरू पनि देखिएका थिए। यस वार्षिक परेडमा रुसको मिसाइल क्यारियर टीयु-९५ एमएस र टियु-१६० व्हाइट स्वान’ पनि देख्न सकिनेछ।
यस अवधिमा रुसको पाँचौं पुस्ताको लडाकु विमान सुखोई–५७ र टु–२२एम३ लामो दुरीका बम्बर पनि परेडमा सहभागी हुनेछन्। रुसको रक्षा मन्त्रालयले आठ मिग–२९ लडाकु विमानले आकाशमा ‘जेड’ चिन्ह बनाउने पुष्टि गरेको छ।
रुसले युक्रेनमाथि यही निशानको साथ हमला गरेको छ। रसियाको आइएल-८० म्याक्सडोम विमान परमाणु हमलाको अवस्थामा रुसको आकाशमा आँखा जस्तै हो। यसमा, हावाको बीचमा तेल भर्न सकिन्छ।
यो विमानको सहयोगमा पुटिनले रुसमा शासन गर्न सक्छन् र आफ्नो सेनालाई विश्वको जुनसुकै ठाउँमा परमाणु हमला गर्न आदेश दिन सक्छन्। यसमा ठूलो एन्टेना जडान गरिएको छ जसको सहायताले जहाँसुकै सञ्चार गर्न सकिन्छ। यसपटक सारा विश्वको नजर रुसमा मे ९ मा हुने विजय दिवस परेडमा केन्द्रित हुनेछ ।
यस परेडमा पुटिनले के भन्लान् भन्ने कुरा विश्वले सुन्न चाहन्छ। किनभने पुटिनको एउटा इशारा विश्वयुद्धको सुरुवातको ट्रिगर बन्न सक्छ। विजय दिवस परेडमा पुटिनले बोल्दा युक्रेनको उल्लेख अवश्य हुनेछ र युक्रेन युद्धमा रुसको विजयको दाबी बाहेक उनी केही भन्न चाहँदैनन्।
पछिल्लो समयको कुरा गर्दा रुसको आक्रमणको केन्द्रविन्दु पूरै युक्रेन नभई केही भागमा केन्द्रित छ । रुसी आक्रमणहरू डोनबास क्षेत्रमा बढी भइरहेका छन्, जसमा लुहान्स्क, डोनेस्कजस्ता क्षेत्रहरू समावेश छन्, जसमा रूस पूर्ण नियन्त्रण चाहन्छ। रुस पनि खार्किभमा पूर्ण नियन्त्रण चाहन्छ र यस क्षेत्रमा पनि रुसी आक्रमण तीव्र भएको छ।
रुसले मारिउपोल कब्जा गरेको छ, जापोरिझियाका क्षेत्रहरू पनि रुसी नियन्त्रणमा छन्। मेलिटोपोल र खेरसनमा पनि रुसी सेना अडिग छ। रुसले खेरसोनमा युक्रेनी मुद्रालाई रुबलसँग बदल्ने योजना बनाएको छ। ओडेसाका केही भागहरूमा रुसी सेनाको पनि उपस्थिति छ।
रुस युक्रेनको पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रमा सीमित भएको छ । रूस मे ९ अघि यहाँबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेको छैन। रुसको योजना क्रिमियाबाट ल्यान्ड करिडोर निर्माण गर्ने भएको विज्ञहरू बताउँछन्।
जुन क्षेत्रमा अहिले आक्रमण भइरहेको छ वा नियन्त्रणमा छ, ती क्षेत्रहरूबाट यो ल्याण्ड करिडोर जानेछ। यो योजना सक्रिय भएको छ। यसरी युक्रेनको यो पूरै भाग रुसको नियन्त्रणमा आउन सक्छ र रुसले यसलाई प्राप्त गर्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएको छ।
पुटिनको मे ९ योजनाको झलक कीभमा पनि देखिएको थियो जब संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुख एन्टोनियो गुटेरेसले २७ अप्रिलमा रूसको भ्रमण गरेका थिए। गुटेरेसले भ्लादिमिर पुटिनलाई भेटेर युद्ध रोक्न र शान्ति स्थापना गर्न आग्रह गरे।
त्यसपछि उनले युक्रेन पुगेर राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीसँग भेट गरे। आफ्नो सम्बोधनमा, संयुक्त राष्ट्र प्रमुखले फेरि एक पटक शान्तिको लागि अपील गरे, तर रूसले मिसाइल आक्रमणको साथ उनको अपीलको जवाफ दियो।
रुसले गुटेर्रेस बसेको होटलबाट अलि टाढा मिसाइल आक्रमण गरेको थियो। रुसी रक्षामन्त्रीले युक्रेनमा खसालेको बम सही लक्ष्यमा प्रहार भएको पनि बयान दिएका छन्।